Umntwana odilikayo aphupha ntoni? Ukuchazwa kwengqondo yobuthongo
Ukuchazwa kwephupha apho wabona umntanki obomile
Ukubona umntwana ogwityiweyo ephupheni uyothusayo njengoko kunjalo. Ngenxa yoko, emva kwephupha elinjalo, abantu abaninzi banokuxinezeleka okukhulu. Kodwa ngaphandle kweentsholongwane ezonakalisiweyo, lo mqondiso uthembisa utshintsho olukhulu ebomini bomntu owaba ngqina. Ngoko ke ulindele ntoni kwixesha elizayo, ukuba uphupha ukuba umntwana ugxobhoza? Ziziphi iziprofeto ezilungiselelwe thina kule nkcazelo ngeencwadi ezidumile zephupha? Makhe sijonge impendulo!
Umntwana odilikayo aphupha ntoni?
Iphupha apho ubona umntwana obomileyo ahluke kakhulu, ngamanye amaxesha uphi na ukuchasana. Ukuba uphupha ukuba umntwana unzima ukuba angagxinyi, okokuqala okokuqala, zama ukukhumbula ukuba ngubani umntwana. Kwimeko apho umncinci omncinci uyinzala yakho, ngoko, ngelishwa, ngumqondiso wesifo esisondelayo somntwana.
Ukuba umntwana usuka ephupheni uphenduka kuba yindodana okanye intombi yomhlobo wakho, ngoko, mhlawumbi, lo mntu uza kukhawuleza abhekane nobunzima obunzima bokuphila. Ukubona umntwana ongaqhelekanga umqondiso wenkxwaleko encinci okanye amaxesha omdaka obubi elinde wena. Ngaloo ndlela, akulophupha kumphuphi.
Kubaluleke kakhulu umbala wamanzi apho umntwana engengozini. Ngoko, umzekelo, amanzi ahlambulukileyo angenanto, ngokwezithetoli, uphawu lwempumelelo, ukuchuma kwemali. Yonke ishishini iqalile liya kuba yimpumelelo. Ukongeza, lo mbala wamanzi ubonisa ukuba ujikelezwe ngabahlobo abanyanisekileyo, abathembekileyo nabanyanisekileyo. Ukuze ubone amanzi amnyama okanye asemnyama amdaka - ukulungiselela ubunzima obukhulu bezemali, kungenzeka ukuba kungekudala uza kugula kwaye uya kudala ukulungiswa. Kwakhona, ngokutsho kwencwadi yephupha, umntwana usemanzini (ukususela kwintlangano yesanti okanye udongwe), kuthetha ukuba ebomini bakho kukho abantu abonakala bephula into ethile kuwe. Zama ukuhlalutya ngubani onokuba ngumqambimanga, ngoko uya kuzikhusela kwiimeko ezininzi ezingathandekiyo kunye neengxaki.
Ukuba umntwana odilikayo wakwazi ukuphunyuka, ngoko uyazi: endleleni eya kwinjongo enqwenelayo kufuneka ukhuthazele ubunzima obuninzi, kodwa oku akuyikukukhokelela kuphela kwisiphumo esifunileyo, kodwa kunokukwenza ube namandla ngokuziphatha. Ukuba bekuyinzala yakho, zama ukuhlawula ingqalelo ekukhuliseni kwakhe.
Ziyintoni na amaphupha xa umntwana egxobhoza
Isicwangciso esibuhlungu sichazwa njengeencwadi zokuphupha, njengelahleko ezibalulekileyo, ukulahleka kwepropati exabisekileyo. Emva kweeveki emva kwephupha elinjalo, akukho mzekelo ungathathi imali kwityala, ungafaki isicelo semboleko. Uya kufumana imali, kodwa awukwazi ukuyibuyisela. Kwakhona ngelo xesha, ziyeke kwiintengo ezinobungozi - ungahlala nento.
Ukuba umntwana egwityiwe ephupheni kwaye waphoswa elwandle, unokulindela utshintsho olukhulu. Mhlawumbi olu tshintsho luya kubonakala lufana nezilingo kuwe, kodwa ekugqibeleni, ziya kukunceda kuphela.
Ewe, iphupha malunga nomntwana ogxobhozayo alungena kwisigaba sokuphumla nokuzonwabisa. Kodwa nangona kunjalo, ukutolika kweliphupha kukunika ithuba kwakhona ukuqonda ubomi bakho, ukucinga kwakhona ngeenxa zonke zakho, izenzo kunye, mhlawumbi, umlingiswa. Vumela iphupha elilandelayo livuyiswe!
Ukutolika kwamaphupha malunga nokwesaba iindawo eziphakamileyo
Inyoka inokuphupha ntoni ngeliphupha ukutolika?
Yintoni ephuphayo indlu?
Yintoni abantwana abaphupha ngayo?
Indlu iyawa: yiyiphi iphupha elifanayo lithetha
Iphupha legolide okanye liphi iphupha legolide
Iingcamango zokuzalwa: ziza kuthini na iincwadi zephupha?
Isaladi zokukhanya kwimihla
Iimpawu zokuqala zokukhubazeka kwentliziyo
Unokufumana njani uninzi kwaye uchithe ubuncinci kwizitolo ze-intanethi? Iingcebiso ezifanelekileyo zokugcina
Jam kusuka kwikroti
Ziziphi iimpawu zokuqwalaselwa kwamantombazana?
Impawu yesondlo sabasetyhini abakhulelweyo
Unyango lweengxaki zokukhathazeka jikelele
Minestrone e Genoese
Iikhalenda zesikhenkethi zeLunar: ngoMeyi 2014